TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY (...)
FIKAROHANA ARA-TSIANSA :
TETIKASA HIADIANA SY HANALEFAHANA NY VOKADRATSIN’NY RADAKABOKA
Notanterahina nanomboka ny 20 septambra 2021 any Toamasina ny fihaonana siantifika momba ny tetikasa RADAKABOKA izay iarahan’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana sy ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy.
Hatramin’ny taona 2010 izay nahatafiditra ny radakaboka teto dia tombanana ho 20 tapitrisa no isan’izy ireo ankehitriny. Mitombo tsy ankijanona ny isan’izy ireo ankehitriny amin’ny hafainganampandeha tena mampiahiahy sy mampatahotra.
Tanjon’ity hetsika ity ny hanamafisana ny ady amin’ny fiparitahan’ny radakaboka sy famerana ny voka-dratsiny eo amin’ny mponina sy ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny izay mifototra amin’ny fahalalana ara-tsiansa.
Manome famatsiam-bola ho an’ny fikarohana siantifika hiadiana amin’ny radakaboka sy hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny oniversite toamasina, ny Madagascar Fauna and Flora group ary ny vahoaka eny ifotony ny tetikasa Ambatovy.